Aros Energy kuzivisa pasi moto zvakawanda munzvimbo | Holmbygden.se
Posted on 17 Gumiguru, 2013 kubudikidza Holmbygden.se
21/10 iye & rendi: Vazhinji mibvunzo pamusoro Aros Energy kuzivisa
Aros Energy advertising AB achaita mumazuva aizivikanwawo mune mamwe mativi Sweden.
svondo rapera Rental muenzi Association Journal Home & Rent kuna Aros Energy kuzivisa nomuromo Sachigaro Michael Sterner anoramba Kutenga Johan Stendahls yapfuura Real Estate. nguva ino Tobo kunze Uppsala.
The magazini Home & Rent kwemakore vakatevera ehupfumi mishandled muna Tobo uye akagadza Johan Stendahl mumwe yakaipisisa landlords Sweden raMwari. Zvisinei, Stendahl, akaita nyaya kumatare waVarimi Vakaipa Association. Chinangwa Iye aimiririra rworudyi gweta Michael Sterner somumiririri wake pamutemo,.
Sezvakaitika Holm haana mutengi mutengesi ngaarege yakaudza varimi avo Tobo pamusoro chii kuitika. What Aros Energy advertising AB kunoita kunge kundinyima, kunyange apo ivo vakagamuchira mubayiro kusarudza kuti Kutama Board kuti kuchengetedzwa pokugara.
Mutengesi Anotenga ehupfumi anozvipira pasinei “maturo”
The mutengesi ari zvivako zvinobatanidzwa Tobo riri Fagerhyltan pamwe CEO:N Marcus Hamberg. Mune mamwe mazwi, zvakafanana varidzi 2011 Akatenga Senior Home uye Mudzidzisi wacho Housing Holm pashure Stendahls kusauka. iye & rendi avslöjar Uyewo kubatana pakati Fagerhyltan AB uye Johan Stendahl. Marcus Hamberg akataura kuti rokutengesa nokuda murombo profitability. “Ndakasiya ipapo. Ndinogona chete dai nemhanza yakanaka itsva muridzi”, anoramba.
Chii Marcus Hamberg arege kufunga paakati, “akarisiya ipapo” uye “dai mutsva muridzi mhanza” ndechokuti zvechokwadi iye uyo anova muridzi mutsva. Sezvo achangobva zvinoti Fagerhyltan ichangobva kuva muridzi Aros Energy advertising AB ruzhinji. Saka, akatengesa boka iri musimboti anozvitsvakira. Musiyano ndechokuti “Aros Energy advertising AB” pamusoro chikumbiro kuna Swedish Kutama Board uye kuti uyewo nemumwe Michael Sterner (zvose kwokubatana kuna Johan Stendahl) anomirirwa mune boka idzva.
Verenga zvakawanda kubva magazini Home & Rent pamusoro Aros Energy Mhiko Tobo, Uppsala
16/10 iye & rendi: Aros Energy kuzivisa kutanga vatizire slaapplek muna Tobo
8/10 iye & rendi: Murombo profitability chokufunga rokutengesa
7/10 iye & rendi: Fagerhyltan akatengesa Tobo-imba pasina paakaudza varimi